Paradise - Chopard Red Carpet Collection 2021 - HIGH JEWELLERY DREAM
Chopard အမြင့်ရတနာ အမြင့်ရတနာ
ပရဒိသု - 2021 Chopard Red Carpet Collection
Chopard သည် Red Carpet Collection အသစ်နှင့်အတူကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
၇၄ ကြိမ်မြောက်ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုစောင့်နေစဉ်၊ Chopard သူတို့ရဲ့ Red Carpet Collection: Paradise အသစ်ကိုမျှော်လင့်ထားတယ်။
Chopard သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၆ ရက်မှဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်အထိလာမည့်ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်၌ပရဒိသုအသစ်ကိုတရားဝင်တင်ဆက်ခဲ့သည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ ၇၄ ကြိမ်မြောက်ပွဲတော်အနေဖြင့် ၇၄ ခုပါ ၀ င်မည့်မြင့်မားသောရတနာစုဆောင်းမှု၏ပထမဆုံးသောအပိုင်းများကိုကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းရှိသည်။
သဘာဝတရားသည်၎င်း၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုအားလုံးအတွက်နောက်ကွယ်မှမောင်းနှင်အားတစ်ခုဖြစ်သည် ပရဒိသု, အသစ်ကော်ဇောစုဆောင်းခြင်း။
သဘာဝသည်ဤနေရာတွင်အိပ်မက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအသီးများသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းလက်လှမ်းမီနိုင်သည့်နေရာဖြစ်ပြီးလူတိုင်းလိုအပ်သည်ဟုခံစားရသောအခါပြန်လည်ထူထောင်နိုင်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုရှာဖွေခြင်း၊ မိမိစိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်းနှင့်နက်ရှိုင်းစွာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရရှာဖွေခြင်းအတွက်“ ပရဒိသု” ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ နတ်ဘုံနတ်နန်း အနီရောင်ကော်ဇောတွင်စုဆောင်းထားသော Baroque နှင့်သာမန်ထက်ထူးကဲသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်။ ဒဏ္myာရီသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်နေရာများ၏စိမ်းလန်းစိုပြေသောသဘောသဘာဝကိုဤစိတ်ကူးယဉ်ပြဇာတ်ရေးရာတွင်နေထိုင်စေသည်။
ဒါဟာလျှို့ဝှက်ချက်ဆုတ်ခွာနေခြင်း၊ ခိုလှုံရာရှာတွေ့ဖို့တင်စားထားတဲ့နေရာတစ်ခု၊ သင်အသက်ရှုနိုင်ဖို့အဖြစ်မှန်မှလွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်သည်။
ဒီစကြ ၀ fromာမှလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ကာရိုလိုင်း Scheufele သည်အနီရောင်ကော်ဇောစုဆောင်းမှုနှင့်ဒီနေ့ခေတ်နမူနာများကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုရန်အတွက်သူ၏ဖန်တီးမှုအရင်းအမြစ်အားလုံးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ပထမ ဦး စွာအဝါရောင်စိန်တန်းတန်းသည်ထူးခြားသောကျောက်တုံးဖြင့်အလှဆင်ထားသောdccolletéကိုထွန်းလင်းပေးသည့်နှစ်ပွင့် Aristocrat choker ကိုဆွဲဆောင်သည်။ သူတော်ကောင်းတရား ၃၀.၆၈ ကာရက် ဖန်စီကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအဝါရောင် စိန်တစ်လုံးတည်းတွင်ဤရတနာပရဒိသု၏ကြွယ်ဝမှုနှင့်ခမ်းနားထည်ဝါမှုများကိုသူကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်ထားပုံရသည်။
ကျင့်ဝတ် Fairmined - အသိအမှတ်ပြု ၁၈ ကာရက်ရှိအဝါရောင်ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကျောက်မျက်ရတနာတောက်ပသောအဝါရောင်စိန် (18cts) ပါ ၀ င်ပြီးစတုရန်းပေရှည်သောပြင်းထန်သောအဝါရောင်စိန်များ (၈၃.၁၅ ကာရက်) နှင့်အဝါရောင်စိန်များကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
Chopard နတ်ဘုံနတ်နန်း အနီရောင်ကော်ဇောငွေကောက်ခံ 2021 ။
နီပေါပင်လယ်ပြင်၏ထူးခြားသောလှိုင်းများဖြင့်လွှမ်းမိုးနေသော“ dauphins” လက်စွပ်သည်စိန် cetaceans ငယ်လေးများကို ၅၉ ကာရက်ရှိဘဲဥပုံတန်ဇန်းနိုက်တစ်ခွင်တွင်ကခုန်စေသည်။
Chopard နတ်ဘုံနတ်နန်း Red Carpet Collection 2021. Fairmined-Certified ၁၈- ကာရက်ရှိရွှေဖြူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော 'လင်းပိုင်' လက်စွပ်သည်ဘဲဥပုံတန်ဇန်းနိုက်၏ ၅၉.၃၃ ကာရက်၊ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသည့်နီလာ (စုစုပေါင်း ၁၀.၆၇ ကာရက်)၊
အရောင်အသွေးစုံသည့်ဂရပ်ဖစ်ပုံစံများကိုပန်းချီကားများဖြင့်သရုပ်ဖော်ထားသောကျောက်မျက်ရတနာများသည်သဘာဝ၏တုန်ခါမှုနှင့်ရေကိုသက်သာစေသည့်စွမ်းအင်ကိုပေးသည်။ နတ်ဘုံနတ်နန်း Red Carpet Collection သည် Chopard ၏ဂျီနီဗာရှိရတနာမြင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကိုဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ ချိန်းဆိုချက်အဖြစ်လွဲချော်သွားသည်ဟုသူကအတည်ပြုသည်။
ကနေပို နတ်ဘုံနတ်နန်း စုဆောင်းမှု…
Chopard Red Carpet Collection 2021. နှလုံးပုံသဏ္diamondာန်စိန်များ (၃၆.၅၅cts)၊ အနီရင့်ရောင်စိန်များ (၄.၀၅ ကာတာ) နှင့်အသားအရည်များပါ ၀ င်သောကိုယ်ကျင့်တရား ၁၈ ကာရက်ရှိရွှေဖြူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်ချောင်း။
Chopard Red Carpet Collection 2021. Fairmined အသိအမှတ်ပြု ၁၈ ကာရက်ရှိရွှေဖြူနှင့် titanium set cabochon spessartine garnet (၂၄.၀၉ စက္ကန့်)၊ ပန်းပုလက်ရာဂါနာ (၁၁.၁၉cts)၊ ), ပတ်ပတ်လည် lazulites (18cts), cabochon နီလာများနှင့်ပတ်ပတ်လည် amethysts ။
Chopard Red Carpet Collection 2021. မြ ၀ တီ cabochons (18cts) နှင့်စိန်တောက်တောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Fairmined - အသိအမှတ်ပြု ၁၈ ကာရက်ရှိရွှေဖြူနှင့်တိုက်တေနီယမ်များရှိလက်ကောက်။
Chopard အနီရောင်ကော်ဇောငွေကောက်ခံမှု 2021. အမြင့်ရတနာလက်ကောက်။
Chopard အနီရောင်ကော်ဇောငွေကောက်ခံ 2021. Leaf ပုတီး။
Chopard အနီရောင်ကော်ဇောငွေကောက်ခံမှု 2021. အမြင့်ရတနာပုတီး။ ပတ် ၀ န်းကျင်နှစ်မြုပ် (၃၆.၈၀ နှင့် ၃၂.၁၆) တွင်သစ်တော်သီး၊ ကျောက်နီနှင့်တောက်ပသောစိန်များဖြင့် Fairmined အသိအမှတ်ပြုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာရွှေကိုတင်ထားသည်။
Chopard Red Carpet Collection 2021. Fairmined အသိအမှတ်ပြု 18-carat rose gold နှင့် titanium အစရှိသော opals (23.43cts)၊ ပတ်ပတ်လည်အဝါရောင် - အဝါရောင်နီလာနီလာ (4.07cts) နှင့်အဝါရောင် Sapphires (၆.၆၅cts) တွင် 6.65 မီးလောင်စေသောလက်စွပ်။ -shaped ပတ္တမြား (2.78cts) နှင့်ပတ်ပတ်လည် -shaped အဝါရောင်စိန်။
Chopard နီကော်ဇောငွေကောက်ခံ 2021
Chopard Red Carpet Collection 2021. စိန်နှင့်ကျောက်မျက်ရတနာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကျောက်မျက်ရတနာအမြင့်ဆုံးရတနာလည်ဆွဲ။
Chopard Red Carpet Collection 2021. Fairmined - အသိအမှတ်ပြု ၁၈ ကာရက်ရှိရွှေဖြူရွှေရောင်အဖြူရောင်ဖန်စီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမြများ (၂၁.၀၁ ကာက္) နှင့်သစ်တော်သီးပုံသဏ္diamondာန်စိန်များ (၁၁.၅၆ ကာလက်) ။
Chopard ။ ပရဒိသုနီကော်ဇောစုဆောင်းခြင်း။ 'Esperanza' နာရီကို Fairmined အသိအမှတ်ပြု ၁၈ ကာရက်ရှိရွှေဖြူဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသစ်တော်သီးပုံသဏ္andာန်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်လည်ပင်းများ (စုစုပေါင်း ၄၁.၈၉ cts) နှင့်စိန်များ (စုစုပေါင်း ၆.၃၈ cts) ။
Chopard ။ ပရဒိသုနီကော်ဇောစုဆောင်းခြင်း။ စိန်နှင့်ပန်းရောင်နီလာများအတွင်းရှိလက်ဝတ်ရတနာအမြင့်။
Tags:ကိန်း • chopard • မြင့်မားသောရတနာ • အနီရောင်ကော်ဇောစုဆောင်းခြင်း
မှတ်ချက်0ခုပရဒိသု - 2021 Chopard Red Carpet Collection"